Eoropa Trip: Nahoana mpizaha tany Raiso Lamasinina fa tsy Planes | Save A Train
Home > Travel Europe > Eoropa Trip: Nahoana mpizaha tany Raiso Lamasinina fa tsy Planes
Inona no fomba tsara ny mandany ny vanin-taona mafana noho ny handeha manodidina Eoropa, marina? Right. Tsy voatery handrava ny banky mba hahita ny sasany amin'ireo tsara tarehy Eoropa kapitaly; mino izany na tsia, fa iray amin'ireo lafiny tsarotra ny vidim-mahomby Eoropa Tsidika no misafidy fiarandalamby fa tsy fiaramanidina noho ny toerana.
Eto dia 5 antony mahatonga ny tombontsoany no nofidiny fiaran-dalamby fa tsy fiaramanidina dia hanampy anao hahita Eoropa eo amin'ny fomba tsara indrindra azo atao.
Izy Ireo Super-Fast
Moa ve tsy ho voafitaka mieritreritra izay London-Paris Eurostar sy Frantsa fiaran-dalamby TGV no haingam-pandeha ihany no lalana lalamby tany Eoropa - fa ny am-polony taona vitsivitsy lasa izay, ireo ry zalahy efa mivoatra haingam-pandeha lalana nanerana ny kaontinanta, anjara ny lalamby ary ny ateraky ny fizahan-tany sy ny fanaovana antoka fa tsy fiarandalamby hatao naka fiaramanidina ho toy ny voalohany indrindra safidy fitetezam-paritany. Eo ho eo, fiarandalamby haingam-pandeha any Eoropa Tsidika 125 ny 200 mph, arakaraka ny lalana sy ny gara dia fabulously interlinked.
Manofana Raha tokony ho Planes toy ny Option Haingana kokoa
Mety ho haingana kokoa noho mihitsy aza manidina, indrindra ho an'ny nivezivezy ela kokoa noho ny 600 kilaometatra. Fa nahoana? Rehefa kajy ao ny fotoana laninao mitondra fiara ho any amin'ny seranam-piaramanidina, dia nahazo teo aloha (ary matetika mandany ny 2 ora alohan'ny sidina), ka mainka fiarovana taratasim-bola, no tonga saina fa mora kokoa ny fiara ho any afovoan-tanàna fiantsonan'ny fiaran-dalamby sy ny birao 5 minitra teo anoloan'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby nandao ny.
Amsterdam ho any Lille Lamasinina
Ianao Aloavy Latsaky Ho an'ny Top-Notch Sleeper Service Noho ny voalohany ny Class Plane Ticket
Na dia rehefa mandeha amin'ny tarehy indrindra fiaran-dalamby, ianao hahazo izany vidiny ara-drariny. Manontany tena ianao hoe nahoana ianao no tsy manao Te fiaran-dalamby mandeha eo anatrehan'i! Ohatra, ianao mandoa manodidina £ 880 isan-olona noho ny roa andro / indray alina dia niaraka tamin'ny Japana ny kintana fito, ary mankafy ny tontolon'ny maitso mavana ny faritra atsimon'i Japoney nosy Kyushu rehefa mandeha; mifanohitra amin 'izany vidiny, tapakila amin'ny fiaramanidina London any Tokyo no lany ianao efa £ 5,000 amin'ny British Airways. Woah! Isika no manana fihetseham-po ianao no mifidy, fa tsy fiaramanidina fiarandalamby manomboka izao, Tsy tianao?
Lost entana no (virtoaly) Tsy re akory rehefa mampitaha lamasinina fa tsy fiaramanidina
Entana very zavatra ny zavatra efa, raha kely indrindra rehefa lavitra mandeha fiaramanidina. Tsy araka izay, gara sy ny fiaran-dalamby tsy very mpandeha kitapo toy ny mpandeha irery ihany no ireo izay manahy ny entana. Azonao atao ihany koa ny mitondra betsaka araka izay afaka mitondra, Tsy toy ny fiaramanidina izay manana mazava entana fetra.
Izany angamba no antony tsara indrindra ny mampiasa fiaran-dalamby fa tsy fiaramanidina.
Salzburg ho any Berlin Lamasinina
Afaka Skip ny helo Airport Security
Raha ny fiarovana, mifidy fiarandalamby fiaramanidina fa tsy lojika toa toy ny safidy, ary ianao ankehitriny ny antony. Ny fiarovana seranam-piaramanidina traikefa dia ankapobeny andiana toe-javatra tsy mahafinaritra. Tsemboka avy hatrany manomboka eo anatrehanao hiondrana an-maso fiarovana na dia fantatrao ianao tsy nanao na tsy ara-dalàna nitondra na inona na inona aminao. ary, aoka isika tsy hanadino ny mahafinaritra fangatahana hanala ny fehin, esory ny kiraro sy whatnot, ary avy eo dia ho Nosafosafoiny teo anilan'ny lavaka Nandray lehilahy. Lamasinina tsy manana izany - ary tsara tarehy be tombo-kase ny fifanarahana.
Browse ny Vonjeo-A-Train au livre ny lamasinina mitaingina ny toerana tena toerana halehany, ary ny tahan'ny mora indrindra! Adinoy rehetra momba ny famandrihana saram Ka hanohona ny mora 3 minitra dingana famandrihana-tserasera.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-trip-trains-planes%2F%0A%3Flang%3Dmg- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#fiaramanidina #railtravel fiaramanidina planetravel lalamby Train Travel